Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka Champions ee caawa ay Kooxda Chelsea qaabilayso Valencia – Gool FM
(London) 17 Sebt 2019. Waxaa maanta daaha laga qaadayaa heerka guruubyada Champions League, iyadoo ay jiraan kulamo adag oo la ciyaari doono caawa.
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa ciyaareysa kulankeeda furitaanka ee heerka guruubyada Champions League caawa, iyadoo soo dhoweynaysa naadiga Valencia ee dalka Spain.
Inkastoo uu soo laabanayo dhammaadka todobaadkan, Antonio Rudiger ayaan ciyaari doonin kulanka caawa oo Talaado ah, sababtoo ah dhibaato dhanka gumaarka ayaa haysta, Emerson ayaana sidoo kale garoommada ka maqnaanaya.
N’Golo Kante, Callum Hudson-Odoi, Reece James ayaa ku soo laabtay tababarka kaddib markii ay ka soo kabsadeen dhaawacyo ay la maqnaayeen, laakiin weli kulankan taam u ma’ahan.
Valencia ayaa haysata koox taam ah oo diyaar ah safarka ay ku tagayaan Magaalada London, laakiin waxaa dhaawacyo muddo dheer ah kaga maqan Carlos Soler iyo Cristiano Piccini.
>- Chelsea iyo Valencia ayaa horay ugu kulmay lix jeer tartammada Yurub, kooxda reer Spain ayaana guul gaarin mid kasta oo ka mid ah kulamadaas, waxaana ay la kulantay 3 guuldarro iyo 3 barbaro.
>- Kooxaha kaliya ee Chelsea ay wajahday inta badan tartammada Yurub iyagoo guuldarro aysan ka soo gaarin waa Valencia (Lix kulan: 3 guul & 3 barbaro) iyo Kooxda reer German ee FC Schalke 04 (Lix kulan: 4 guul iyo 2 barbaro).
>- Chelsea ayaa guuldarro la kulmin hal kulan oo tartammada Yurub ah xilli ciyaareedkii 2018-19, waxa ay adkaadeen 12 kulan iyagoo barbaro galay 3 ka mid ah 15 kulan oo ay ciyaareen UEFA Europa League.
>- Valencia ayaa gaartay UEFA Champions League xilli ciyaareedyo isku xiga markii ugu horreysay tan iyo 2012-13 (saddex isku xigta), taasoo sidoo kale ahayd markii ugu dambeysay oo ay u soo baxaan wareegga 16-ka ee koobkaan, ka hor inta aysan ku reebin wareegan Paris Saint-Germain.
>- Frank Lampard ayaa qabanaya kulan UEFA Champions League ah markiisii ugu horreysay xirfaddiisa tababarennimo, isagoo ciyaaryahan Chelsea ah waxa uu saftay 102 kulan tartankan, waa mid ka mid ah 22 ciyaaryahan oo 100 kulan am aka badan u ciyaaray hal koox tartankan.